SomaliTalk.com » 2011 » August » 11
Home » Archive Maalinta August 11th, 2011
War saxaafadeed kasoo baxay shir golaha wasiiradu ay maanta ku yeesheen Muqdisho
﻿﻿Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada oo uu shir-guddoominayey Ra’iisulWasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlay arrimodhowr ah oo ay ka mid yihiin:1. Howlaha amniga iyo xasilinta Muqdisho,2. Shirka Wadatashiga ee Soomaalida iyo3. Hay’ada Nile ee waxbarashada dalka Turkiga.Guddiga heer wasiir ee arrimaha amniga iyo xasilinta Muqdisho ayaa laga dhageysteywarbixin...
MUXAADARO:Bisha barakaysan ee Ramadaan Sheekh Abuu haashim
MUXAADARO:Muxaadaradani waxay kadhacday wadanka Danmark Gaar ahaan Magaalada Sadexaad ee wadankaas Odense. Waxayna ku saabsantahay bisha barakaysan ee Ramadaan ilaahay haynaku anfoco. Read More →
Sideen u Fahamnaa Quraanka? Q:10aad
Suurada 23aad Al-Mu’minuun: Suuradaan waxaa loogu Magac daray Muminuun si Muslimiinta loo Xasuusiyo Darajooyinka wanaagsan ay ku leeyihiin Janda Fidowsa Dhexdeeda. Suurada waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 118, waxeyna soo Dagatay Suurada Al-Anbiyaa ka dib, waxeyna ku bilaabataa Aayado Xambaarsan Kalimaad Muujinaya liibaanta Mumniinta Maalinta Qiyaame gaarayaan, Juz ahaana waxey kaga Beegan...